Kupi Kwekupinza - Ndeipi Nyika Yakanyanya Kuchengetedza uye Mitero?
Kana yasvika nguva yekusarudza iyo nyika yekuisa munhu ane sarudzo yeapiwo e50 matunhu kana Dunhu reColumbia. Sezvo mitemo inodzora makambani ichisiyana kubva kumatunhu nenyika, pane zvimwe zvakakosha zvinotarisirwa kuti zviongororwe usati waita sarudzo yekuti ingabatanidze kupi. Mubvunzo wekutanga uyo muridzi webhizimisi mutsva angazvibvunza ndewe, "Tichave tichiita bhizinesi mune imwe nyika, kana akati wandei?" Kana bhizinesi richaitiswa zvakanyanya mune imwechete nyika, ipapo kusanganisa iyo nyika inogona kuve iri nyore uye zvine musoro sarudzo. Kana paine nyika dzinopfuura imwechete mune bhizinesi richaitwa, saka bhizinesi rinofanirwa kufunga nezve izvo zvinhu zvine chekuita nekusanganisa mune imwe nyika. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira, asi hazvirevi kune:
Ndeipi mitemo yemubatanidzwa yenyika maererano nemabasa nekodzero dzevatungamiriri, maofficial, uye vagovani vekambani?
Ndeapi mitemo yemakambani ehurumende maererano nekodzero dzevakakwereta?
Ndeupi mutero wemitero kumatunhu ari kutariswa kuverengerwa?
Ndeupi musiyano mumitengo pakati pekubatanidza mune imwe nyika, zvinopesana nekunyoresa sekambani yekunze mudunhu iri?
Steve nemukoma wake vari kutanga bhizimusi rinotsanangura bhizimusi remotokari, maRV, nemagwa. Ivo vari kusanganisa bhizinesi ravo kutora mukana wedziviriro yemutero iyo inopihwa nekubatanidzwa. Ivo vanoda kuchengetedzwa kwemutoro kuchengetedza dzimba dzavo uye zvakavanzika pfuma kubva kumatare edzimhosva anogona kumuka kubva kune bhizinesi chiitiko. Vachave vachishandisa yakawanda nguva yekufamba kuenda nekudzoka kumamisangano, pamwe nekuchenesa mota dzinodhura. Panguva ino mubhizinesi ravo, ivo vari kungodonongodza mota kumusha kwavo California. Kuna Steve nemukoma wake, kusanganisira muCalifornia ndiyo sarudzo inonzwisisika. Dai vanga vachitanga bhizinesi renyika-rese rinotsanangura bhizinesi raizoenda kunopa masevhisi kumatunhu mazhinji, saka vanogona kufunga kupinza mune imwe nyika kuti vawane zvakanakira mutemo wezvematongerwo enyika. Steve nemunin'ina wake vangangoda kutarisa izvo zvinopihwa naDelaware neNevada zvine chekuita nekubatanidzwa.
Mumwe munhu asina kutarisa kuita bhizinesi ravo vega anogona kubvunza, "Sei Delaware?" Paanongoita imwe ongororo munhu anokurumidza kuwana zvikonzero zvakawanda nei inopfuura hafu yemakambani akanyorwa paNYSE akaiswa muDelaware. Delaware ine Dare reChancery iro rinopfuura makore mazana maviri emutemo rinotangira muzvinhu zvine chekuita nemutemo wekambani, uye rine hushamwari mubhizinesi. Vatongi vakawanikwa muDare reChancery vane hunyanzvi mumakambani emakambani. Ivo vanodomwa kune avo zvinzvimbo pane hunhu uye ruzivo rwemakambani mutemo, zvinopesana nesarudzo. Mimwe yemamwe mabhenefiti ekubatanidza muDelaware ndeaya:
Hapana chinodikanwa chekuburitswa kwemazita nemakero ebhodhi rekutanga revatungamiriri.
Iyo fizi yekubatanidza yakaderera.
Iko hakuna mutero wemutero wenyika kumakambani eDelaware asiri kuita bhizinesi muDelaware.
Delaware haina yekutengesa kana yemunhu mutero wepfuma.
Hofisi yebhizinesi haidiwe. Mumiriri chete anonyoreswa anodikanwa.
Mumwe munhu anogona kuita semukuru, director, uye mugovani wekambani.
Vashandi vanogona kuita zvisarudzo zvakanyorwa panzvimbo yemisangano yakatarisana chiso nechiso.
Mhando dzakasiyana dzemabhizinesi dzinogona kuitiswa pasi peimwe denga remubatanidzwa.
Yakaburitswa yekubatanidza kugadzirisa. Delaware kunyange ine sarudzo yekutora bhizinesi rakabatanidzwa mune shoma se1 awa.
Nevada yave yakave nyika inozivikanwa kwazvo mukati mayo yekubatanidzwa nekuda kwemabhenefiti ayo ainopa kune bhizinesi. Pamusoro pechisimba chakasimba uye kuchengetedzwa kwemidziyo iyo inopihwa nekubatanidza muNevada, kune zvimwe zvakanaka. Nevada haimanikidzi mutero wefranchise kana mutero wemubatanidzwa. Iko hakuna wega mutero wemari, inovandudzwa kuvanzika kweiye muridzi, iko kumhanya uko mubatanidzwa unogona kuumbwa, mutero kuchengetedza, uye yakaderera kutanga mutengo. Nevada yatora mabhesiki eiyo yanga iri nzira yekubudirira yeDelaware, ndokuvatora kumberi. Panofanirwa kuve nenyaya muNevada uko chifukidziro chemubatanidzwa chakaboorwa, kunze kwezviitiko zvekubiridzira kwemaune. Pfupiso yezvikonzero zvekuti imwe yakawanda inokweverwa kuNevada yekubatanidzwa ndeiyi:
Yakasimba mvumo yekuchengetedzwa kwemutungamiriri nevatungamiriri vanoita pachinzvimbo chekambani.
Kutanga kushoma uye mutengo wegore
Kuchengeta mutero. Sangano reNevada rinoitisa bhizinesi muNevada inyika yemutero yemahara.
Kuvanzika. Nevada vekambani vanochengeta zvinhu havasi veruzhinji zvinyorwa.
Nyika yeNevada haina kusaina chibvumirano chekugovana ruzivo ne IRS.
Nevada ndiyo yega nyika inobvumidza kuti "Bearing Shares" iburitswe. Aya masheya ndeake chero naani anazvo parizvino, nokudaro achibvumira shamwari inovimbwa kana nhengo yemhuri kubata zvikamu zvacho munguva dzezvinetso.
Minimal kuzivisa uye kuzivisa zvinodiwa.
Iwo madhairekitori haafanire kuve varidzi vemasheya.
Nevada makambani anokwanisa kuburitsa stock kuti iwane capital, yemasevhisi akaitwa, yako wega pfuma, uye zvivakwa. Iwo madhairekitori anokwanisa kuona kukosha mune izvi zviitiko, uye yavo sarudzo inosunga.
Nepo paine kuwanda kwesarudzo uye sarudzo dzinowanikwa kana nguva yasvika yekusarudza nyika yekuisa mukati, chokwadi chekuti kubatanidzwa kunopa kambani chisungo uye kuchengetedzwa kwemidziyo kana ichinge yashandiswa nemazvo zvakafanana. Kuchengeta yako midziyo uye chivakwa kunze kwenzira inokuvadza paunenge uchiedza kurarama iyo yekuAmerica kurota uye kuva nebhizinesi ndicho chinhu chakanyanya kukoshesa. Mushure mekubata nedanho rakakosha, kusarudza nyika yekuisa mukati ichawedzera kune izvo mutero bhenefiti, kuchengetedzwa kwematare, kuchinjika kwekushanda, degree rekuvanzika, uye kuronga kwesangano bhizinesi rinoda, uye ndeipi nyika inosangana nezvinodiwa.